Eyona nto ibalulekileyo yoyilo lweempawu ze-2018 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMelisa Perrotta | | Idizayini yeMifanekiso
Zimalunga neeveki ezimbini sigqibile ukugqiba u-2017 kwaye unyaka omtsha usezinyaweni, siza kukuxelela ukuba yintoni iindlela ezintsha kuyilo lwegraphic ukuba siza kubona.
Ngokwendalo, imikhwa ingumbono wesikhashana ohamba notshintsho ngokujikeleza nangokukhawuleza. Ngale ndlela, imikhwa esiyibonileyo kule minyaka mibini idlulileyo iza kuphela ngokukhawuleza ebusweni izimbo ezigcwele ulingo kunye nokudlala.
1 Iziphumo zobunzima
2 Isiphumo esonakalisiweyo
3 Ithoni yeDuo ekuvezeni kabini
4 Iziphumo zesitayile semibala
5 Isithuba esibi kunye ne-typography engalunganga
6 Imizobo yobugcisa
7 Ukuchwetheza kuyo yonke into
8 Imibala eqaqambileyo
Inqanaba lokuqala kulo nyaka uzayo. Iziphumo ze-glitch zihlala zibonwa njengengxaki kumbukeli. Kungenxa yokuba ivela kwi iimpazamo ezingafunekiyo eziveliswe yisoftware Ngexesha lokukhohlisa imifanekiso. Nangona kunjalo, kulo nyaka siza kufunda ukusebenzisa imifanekiso eyonakeleyo ngokubanika umbono omtsha wobuhle.
Ukuba u-2017 ujonge ukungabi nasiphako, ucocekile kwaye uyonwabisa kulo nyaka uzayo uya kuba sisichasi. Le yindlela esiza kuyibona ngayo le meko intsha isondela kwisandla sobugcisa beli xesha. Ngenxa yoko, ekugqibeleni siya kuba nethuba lokubhenela ukukrazula, ukutshiza, iinyembezi, amabala ombala kunye nekholaji ekugqibeleni ngokwamkelwa okuhle.
Ithoni yeDuo ekuvezeni kabini
La indlela eya kuba ngumdlali ophambili kulo nyaka uzayo. Siza kuyigcina i-duo tone eyayiyinkwenkwezi yonyaka ophelileyo. Ngoku siza kongeza ukubonakaliswa okuphindwe kabini kwimifanekiso ukuvelisa ukubonakala okungalunganga ngakumbi kunye nokugqwethekileyo.
Esi siphumo sifunyenwe ngokukopa umfanekiso okanye ngokusebenzisa imifanekiso emibini edibeneyo yombala ohlukileyo nganye inombala we-monochrome.
Iziphumo zesitayile semibala
Ukuphathwa ngokungekho mthethweni kwemifanekiso kuya kuba yenye yeendlela ezinkulu zonyaka omtsha. Le yindlela esinokuthi sizivumele ukuba sidlale ngayo imifanekiso kwaye sibanike umbono omtsha wokwenza ubuhle Iziphumo ezingekhoyo.
Isithuba esibi kunye ne-typography engalunganga
Xa i-negative iba nethemba kuxa kwenzeka utshintsho lwenene. Indawo engalunganga bekusoloko kunzima ukusebenza nayo njengoko ifuna ulwazi olukhulu lweziganeko zokuqonda. Nantsi indlela izinto zangasemva zihamba ziye ngaphambili kwaye ezo zingaphambili ziye ngasemvaZombini iifonti kunye nezinto kunye nemifanekiso.
Kulo nyaka ukubonakaliswa komzimba kuya kuthatha amandla. Yonke into enxulumene neemveliso zesandla ezinje ngokuzoba kunye nekholaji. Siyakwazi ke ukubona umzobo usetyenziselwe ukuthayipha, uchwethezo usetyenziselwa ukuzoba, imifanekiso enemizobo kuyo kunye neeklagi ezidibanisa ukuzoba, ukufota kunye nomfanekiso.
Ukuchwetheza kuyo yonke into
I-typography ekugqibeleni iba yinkwenkwezi yeqela, emva kweminyaka yokuhlola. Ngokukodwa, siza kubona ukugxila uvavanyo lokuyila okanye lokuyila enokusetyenziswa ngokudibeneyo neendlela ezibalwe apha ngasentla. Kuyabonakala ukuba siza kubuyela kwii-90s ngokuqanjwa ngu iileta zinqunyulwe, zonakele, azingqinelananga ngendlela eqhelekileyo. Siza kubona kwakhona ubuchwephesha bube ngamacala amathathu.
Umkhwa omnye oza kuqhubeka unemibala eqaqambileyo. Bezisetyenziswa ukusukela ukuphela konyaka ophelileyo kwaye kulindeleke ukuba baqhubeke kwimfuno ngexesha le-2019 ngokunjalo. Ngoku i imibala yegradients, kusetyenziswa ukuhambisa umbala ukwenza i-3D, utshintsho lombala, Njl
Kulo nyaka mtsha siza kuba nakho ukusebenzisa amandla ethu okudala ukuba asebenze kwiinkalo ezininzi. Ukuhamba ngengqondo yokungenelela kweefoto, ukusetyenziswa kwemibala eqaqambileyo, kunye nokudityaniswa kwendlela yokubhala, siza kubona ukuba imida ayifumaneki kwaye kukho amathuba amakhulu okusebenzisa izixhobo.
Apha unesifundo seCrehana sokufezekisa ezinye zeempembelelo ezichazwe kwisithuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ezona zinto zibalulekileyo kuyilo lwegraphic lwango-2018